Guddoomiyihii Baarlamaanka Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Iscasilay | allsaaxo online
Guddoomiyihii Baarlamaanka Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Iscasilay
Published on August 18, 2018 by said · No Comments
Wararka aanu hadda ka helayno magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in uu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka dawlad deegaanka soomaalida Itoobiya Maxamed Rashiid Isaaaq.
Waxaa kale oo wararku sheegayaan in isaguna uu is casilay hoggaamiyihii golaha dhexe ee xisbiga Khadar Cabdi Ismaaciil.
Dhawaan ayaa waxaa is casilay madaxweynihii dawlad degaanka Cabdi Maxamuud Cumar, waxaa kale oo uu iska casilay hoggaamiyaha xisbiga ESPDP, waxaana xisbiga guddoomiye ka noqday wasiirka warfaafinta Itoobiya Axmed Shide halka madaxweyne si KMG ah looga dhigay Axmed Cabdi Ilka Case.
Lama sheegin sababta mas’uuliyiintan ay isaga casileen xilalkooda hayeeshee magaalada Adis ababa waxaa dhawaan looga yeedhay madaxda maamulka iyo dhammaan xubnaha golaha xisbiga maamula degaanka iyada oo ay socdaan wadahadallo lagu xallinayo mushkiladihii ka dhashay rabshadihii Jigjiga.
Sidoo kale wefti ka socda Ururka ONLF ayaa ku sugan magaalada Adis ababa, waxaana ay wadahadal kula jiraan dawladda federaalka Itoobiya.